‘कथा काठमान्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	‘कथा काठमान्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक
by Movie Club Nepal ५ भाद्र २०७५, मंगलवार १६:४९ October 10, 2019
५ भाद्र २०७५, मंगलवार १६:४९ October 10, 2019
चलचित्र ‘कथा काठमान्डु’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । बरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको स्वरमा रहेको ‘धुलोमान्डु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको उक्त गीतमा हरिवंशलाई बुलेट फ्लोले साथ दिएका छन् । गीतमा शब्द र सङ्गीत सुरज विक्रम थापा (बुलेट फ्लो)को रहेको छ ।
यस अघि चलचित्रको दुई गीतहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यही चलचित्रको सार्वजनिक एक गीत ‘रातको कुरा’ भने निकै विवादित बनेको थियो । यो चलचित्रलाई सङ्गीत श्रेष्ठले निर्देशन गरेकी हुन् । चलचित्रमा प्रियंका कार्की, प्रमोद अग्रहरी, आयुष्मान देशराज, संजोग कोइराला, सन्ध्या केसी, प्रेक्षा अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्रमा कथा निर्देशक स्वयंमको रहेको छ । लुजा सिंहको छायाङ्कन रहेको चलचित्रलाई विजय राईले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा आउँदो असोज १२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको छ ।
पल र आँचलको ‘कर्कलो पात’ सार्वजनिक !
फिल्म चलेपनि नचलेपनी अर्थ राख्दैन’प्रदीप लाई !
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:४८
सुवेक्षा शुशीलको मायामा अल्झिइन् !
१३ माघ २०७५, आईतवार १७:५१
छक्का पन्जा ३ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक !
४ आश्विन २०७५, बिहीबार १०:१५
फेरी अर्को इतिहास रच्दै ‘छक्का पञ्जा २’
११ बैशाख २०७६, बुधबार १८:०१
‘जिस्म-२’ को ४८ दिनमा छायांकन सकियो !
२९ मंसिर २०७५, शनिबार १०:११
भट्टराईले गरे पदभार ग्रहण
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार ०७:५९
‘मालिका’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक !
सुहानाका पाँच कुरा जुन अनमोललाई मन पर्छ !
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:२८